एमालेले धाक दिँदै हिँडेकाे छ, आउँदाे चुनावमा हालत देखिने छ : प्रचण्ड – E Kutumba
By ईकुटुम्ब On Dec 24, 2021 0
पुस ९, २०७८ शुक्रबार ,काठमाण्डाै – नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेकपा (एमाले) ले धाक दिँदै हिँडेको भन्दै आउँदाे चुनावमा उनीहरूको हालत नागरिकले देखाउने टिप्पणी गर्नुभयो । आज शुक्रवार पार्टी एकता घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले यस्ताे बताउनुभएकाे हाे ।
उहाँले भन्नुभयो, आगोसँग खेल्ने दुस्साहस नगर्नु उचित हुन्छ भनेको थिएँ । के भयो आगोसँग खेल्दा ? बालुवाटारबाट बालकोट भयो । ६ वटै प्रदेशबाट मुख्यमन्त्री चट भयो । अहिले बडो धाक, धम्की लगाएर त हिँडेका छन् । उनीहरूकाे त्यो धाक, धम्की मात्रै हो । आउने चुनावमा देखिने छ । कसको हालत के भयो र कसको हालत के हुने ? त्यो नेपाली जनताले देखाउने छन् ।’
राष्ट्रिय परीक्षा बाेर्डकाे अध्यक्षमा महाश्रम शर्मालाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्काे निर्णय